Babylon Professional - Page2- မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
ရသေးဘူး ... ))း
ကိုစစ်တွေသားချေ ... ကျွန်တော်လဲ အဲဒါနဲ့ ပွဲပျက်နေတာဗျ ... ၃ ၊ ၄ ရက်လောက်ရှိနေပြီ ... ဖြုတ်လိုက် .. ပြန် run လိုက်နဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတာ .. ကျွန်တော်ကြုံနေတာကိုပြောပြမယ်ဗျာ ... အရင်က ကျွန်တော်လဲ တခြားသူတွေလိုပဲ အဆင်ပြေနေရင်းကနေ purchase လုပ်ခိုင်းတဲ့ စာတန်း ပေါ်လာရော .. ဒါနဲ့ your uninstaller နဲ့ ဖြုတ်မယ်ပေါ့ ဆိုပြီး ဖွင့်လိုက်ရော .. အဲ့မှာ your uninstaller မှာ babylon ကို မတွေ့ဘူးဗျား ... ကြောင်တောင် သွားတယ် .. ဘာလဲဟ ပေါ့ .. ဒါနဲ့ control panel ကို ဖွင့်ကြည့် တော့ ငနဲက အခန့်သားဗျ .. အဲဒါနဲ့ control panel ၊ add or remove ကနေပဲ ဖြုတ်လိုက်တယ် .. ပြီးတော့ registery မှာ ဖျက်တယ် .. C: ထဲက ဖိုဒါကို manual ပဲ ဖျက်ပစ်လိုက်တယ် .. အကုန်ရှင်းပြီပေါ့ .. ဒါက uninstall လုပ်တုန်းက ဖြစ်တာဗျာ .. ပြီးတော့ ပြန် run ထားတော့ patch ဖိုင် နဲ့ တခု တွေ့လို့ ဖြည်ထားတာ .. အလုပ်လုပ်တယ်ဗျ .. အခန်းထဲ သူငယ်ချင်းတောင် ရှယ်လိုက်သေး .. အဟီး .. ခုညကျမှ အင်္ဂလိပ်ကားကြည့်ရင်း မသိတဲ့စာလုံးရှာမလို့လုပ်တော့ ဟိုဒင်း စာတန်းကြီးက ငေါက်ခနဲ ပြတော့တာပဲ .. )))း ဒါနဲ့ မိသားစုကို ပြန်လစ်မှဆိုပြီး လာကြည့်တော့ ကိုစစ်တွေသားချေ ပို့စ် ကို တွေ့တာနဲ့ ၀မ်းသာသွားတာ .. ဒါနဲ့ uninstall ပြန်လုပ် .. registery တွေပြန်ဖျက် .. ပြီးတော့မှ .. ကိုစစ်တွေသားချေ တင်ပေးထားတဲ့ ဟာကို ဒေါင်းပြီး run ထည့်လိုက်တာ .. အားလားလား .. တခါတည်း restart ကျသွားတယ် .. ဟင့်စ် .. :P .. ဘီလိုဖစ်တာလဲဟင် .. ကူညီကြပါဦး .. ကိုစစ်တွေသားချေ မဟုတ်လဲ မော်မော်တွေ ၊ အင်ဒမင်တွေ ၊ ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ် သိတဲ့သူများ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ အဆင်ပြေနေကြလဲဆိုတာလေး ထပ်ပြီး နည်းလမ်းပေးကြပါဦး ... ဘာပဲပြောပြော ကိုစစ်တွေသားချေကိုရော ၊ တင်ပေးထားတဲ့ တခြားသူတွေကိုပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ .. နည်းလေး ရှိရင် ထပ်ပြောပေးကြပါဦး .. crack , patch , fullversion အကုန် စုံနေပြီ .. ဟိုစာတန်းကြီးနဲ့ပဲ မိတ်ဆက်နေရလို့ .. !
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ psycho အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မျိုးမြတ်, htikewailinn, PoeHapGyi
ကို psycho ရေ.. ကျွန်တော့်တုံးက တော့ ကို Kznt တင်ပေးထားတဲ့ ဟာလေးနဲ့ အဆင်ပြေပါတယ်...အဲဒီ မှာ ဘယ်လိုကလိမိတယ်မသိပါဘူးဗျာ.. ဒုက္ခရောက်ပီး အကို့လို ဖြစ်လို့... ကို hellboy ပေးထားတဲ့ဒါလေးကို run လိုက်တော့ အဆင်ပြေသွားတယ်..
ိuninstall လုပ်ရင် registry ကော C: ထဲက folder လေးကိုပါ တခါတည်း အပီးဖျက်ပီးမှ run ကြည့်ပါလား အကို...
ကျွန်တော်အဆင်ပြေသလို တခြား အကိုအမတွေ လည်း အဆင်ပြေစွာသုံးနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ...
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ နိုးတူး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မျိုးမြတ်, hellboy, phoetharlay, PoeHapGyi, psycho
ကျေးဇူး ကိုနိုးတူးရေ .. ကျွန်တော်လဲ အမြင်ကတ်ကတ်နဲ့ ၅ ခေါက်လောက် ပြန် run လိုက်ဖြုတ်လိုက်နဲ့ patch တွေရော crack ရော အကုန်ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဟာဆိုပြီး လုပ်ထည့်လိုက်တာ ရသွားပြီ .. ဟွစ် ... .. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျေးဇူးပါ ...
စစ်တွေသားချေ, နိုးတူး, phoetharlay
ရတော့ဝူးဗျာ .. ဂယ်ကြီး စိတ်ညစ်သွားပြီ .. ဟိုတခါလို စာတန်းကြီးတောင် မမြင်ရတော့ဘူး .. တခါတည်း run လိုက်တာနဲ့ restart ထိုးထိုးကျတော့တာပဲ .. ဓါတ်လေတယ် ..
serious error ဆိုပြီးတောင် အပေၞကလို ပြလာတယ်ဗျာ .. အဟင့် .. ကျွန်တော် တယောက်တည်းလားဆိုတော့ မဟုတ်ဘူးဗျ .. ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းတွေ ၃ ၊ ၄ စက်လောက်လဲ အဲလိုပဲဖြစ်နေတာ .. ရတော့ဝူးလား သိဝူး ..
23-12-2010, 12:45 AM
[quote=psycho;194633]ရတော့ဝူးဗျာ .. ဂယ်ကြီး စိတ်ညစ်သွားပြီ .. ဟိုတခါလို စာတန်းကြီးတောင် မမြင်ရတော့ဘူး .. တခါတည်း run လိုက်တာနဲ့ restart ထိုးထိုးကျတော့တာပဲ .. ဓါတ်လေတယ် ..
ကျွန်တော်လဲ ကြုံဖူးတယ်ဗျ။ error ချင်းတော့ မတူဘူး ကျွန်တော့်တုံးက physical memory damped ဆိုတဲ့ blue screen ပေါ်ပီး restart ကျသွားတယ်ဗျ။ ဘယ်သူတင်ပေးတဲ့ ဟာကို ပဲ install လုပ်လုပ်။ အဲဒါနဲ့ safe mode နဲ့ ပြန်တက်ပီး အင်စတောလုပ်လိုက်တော့ ရသွားတယ်။ safe mode ကနေ အင်စတောလုပ်ကြည့်ပါဦး။
Last edited by သက်နိုင်; 23-12-2010 at 01:14 AM..
နိုးတူး, arkaraung, hellboy, psycho
24-12-2010, 02:30 AM
ဒီကောင်လေးကိုစမ်းကြည့်ကြပါအုံး patch လည်းမဟုတ် crack လည်းမဟုတ်ဘူးဗျ serial key လေးပါလာတယ် အဲဒါလေးကိုထည့်လိုက်ရင်အဆင်ပြေတယ်ဗျကျွန်တော့်စက်မှာတော့ ကိုမုန်းတိုင်းဆိုဒ်ကယူလာတာပါ ဒီကောင်လေးကိုအသုံးပြုနည်းကတော့ အရင်ဆုံးမိမိစက်မှာတင်ထားတဲ့ Babylon ကို Uninstall လုပ်လိုက်ပါ ဘယ်လိုဖြုတ်ချချ ဘာနဲ့ပဲဖြုတ်ချချပါ အဓိကက C: file ထဲမှာဖိုင်အခွံတောင်မကျန်အောင်ဖျက်မယ် Registry ထဲမှာမကျန်အောင်ဖြုတ်မယ် ကျွန်တော်ကတော့ C:file ထဲက ငတိကို Unlocker နဲ့ကစ်ပစ်လိုက်တာ ပြီးရင် ပြသနာများမယ်ထင်တဲ့စက်များ C partition တစ်ခုလောက်ကိုတော့ Defragment လေး Disk Cleanup လေးလောက်တော့လုပ်သင့်တယ်ထင်တယ်ဗျ စက်ကလည်းသိတဲ့အတိုင်းလေ ကိုဖြိုးမြင့်သိန်းပြောတဲ့ ထိန်းသိမ်းမှုညံ့ရင်ညံ့သလို ဒုက္ခပေးတာကို ( မိန်းကလေးများလိုပဲ ဟိဟိဟိ အမများ ညီမလေးများ တီတီများ ကျော်ဖတ်နော်... စိတ်ဆိုးရဘူးနော်.......... ) အဲလိုတွေလုပ်ပြီးပြီးစက်ကလည်း ဖလန်းဖလန်းလေးဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့(refresh လုပ်တာကိုပြောပါတယ် ) Babylon လေးကို ဂွမ်းဂွမ်းနဲ့မြည်အောင် install လုပ်လိုက်ပါ အဲမှာ ကောင်းတာကတော့ Internet ကိုပိတ်ထားတာကောင်းမယ်ထင်တယ် (အထင်သာဖြစ်ပါသည် ဘာလို့လဲဆိုတော့ လိုင်စင်ကီးတောင်းတယ်ဆိုတာက အင်တာနက်မှာပဲသွားသွားလုပ်နေရတာကိုဗျ နောက်ပြီးတော့အတုလား အစစ်လားကလည်းသူကနေပဲစစ်တာကို အထင်သာဖြစ်ပါသည် ။ ) Install လုပ်စဉ်မှာလည်း Custom အင်စတော့လုပ်လိုက်ပါ အဲမှာသူက ၄ ခုလားသိဘူး(မေ့သွားလို့) အဲဒါမှာ အင်တာနက်နဲ့ပတ်သက်တာရယ် အဲမှာ babylon tool bar တို့လည်းဖြုတ်ပစ်ဗျာ အဲလို နဲ့ Install လုပ်လိုက် ပြီးသွားရင် ဘေဘေ က ပိုက်ဆံတောင်းလိမ့်မယ် (အလှုခံသလိုပဲ လက်ဝါးလေးဖြန့်ပြီးတော့ ) အဲဒီမှာလက်ဝါးဖြန့်တာလေးဖြစ်ဖြစ် Expire ဆိုပြတာဖြစ်ဖြစ်ပါ ပိတ်ပစ်လိုက် Task bar မှာကြည့်လိုက်ပါ Babylon Icon လေးတွေ့ပါလိမ့်မယ် Icon >> R-Click >> Enter License >> ကနေမှ ကျွန်တော့်တင်ပေးတဲ့ဆော့ဝဲထဲမှာပါတဲ့ Username : ရယ် Serial key ရယ်ကို ထည့်လိုက်ပါ ပြီး၇င်တော့
အောက်မှာပါတဲ့ Enter Code ဆိုတာလေးကိုကလစ်လိုက်ပါ ပီးရင် OK ပေါ့ အဲဒါပြီးရင်တော့ ကေကေပြပြီပေါ့ဗျာ.....ပြေလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်မနေ့ကဆော့ဝဲပဲ တင်ပေးလိုက်တာ အခုတော့ ပြသနာများတယ်ဆိုလို့ နည်းနည်းပြန်ရေးလိုက်တာပါ ..... သိသမျှကိုသိသလိုသာဖြန့်ဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်
ဒီလင့်မှာလည်း Babylon Serial Keys တွေအများကြီးပါ တင်မပေးတော့ဘူးနော်....လိုအပ်တယ် ဆိုရင်တော့သွားယူလိုက်ပါ
Credit : http://www.mone-tine.com
Update !!! : 08/01/2011
ဒီလင့်မှာကတော့ အပြည့်အစုံပါပဲဝင်ကြည့်လိုက်ပါအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ် လိုအပ်ရင်ပြန်ပြောပါ အဲဒီလင့်ကအတိုင်းပြန်တင်ပေးပါ့မယ်ဗျာ.....
အားလုံးအဆင်ပြေအောင် ကီးတွေကိုဒီမှာကူးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်.... အများကြီးပါပဲ...
ser Name: Nonyemokolo
License Code: Babylon 8.0 & Oxford Dictionary: 4786UZCNWPEGPRGK3EX3P60EZWDKF3*FQ
User Name: Karen Senecal
License Code:Babylon 8.0 & Oxford Dictionary: 5YCPF2SUCJBF8P0T2PKK2V9RU0GM05*XX
User Name: ﻿ Tammylainelarly
License Code: Babylon 8.0: YY0DFV6BHH3HMT0GFE
User Name: Deborah Armstrong
License Code: Babylon 8.0 - Lifetime License: R3BVW3VW87XYUGRN8J
User Name: Jeremydkettle
License Code: Babylon 8.0 & Oxford Dictionary: JTVQ0ASJ04QW9M6TNKYAMM507YM6Z7*9X
User Name: Stevensmith
License Code: Babylon 8.0: 8X0JYC4TZ4YDMGYGRE
User Name: Vivianllinder
License Code: Babylon 8.0: 2R0U2CWGAQRNJNBHJ6
User Name: ﻿ Christinecastaing License Code: Babylon 8.0: SPTZKBG067VDYFF
User Name: Stofberg
License Code: Babylon 8.0 & Oxford Dictionary: U4K5CQ8ZVMJ2T2KHVJT69HF7NMS03S**MD
User Name: Quinten C Stevens
License Code: Babylon 8.0 & Oxford Dictionary: CKB2534FZZGYU9S0B52YGWBBUJB42J**PW
User Name: Ralph Baard
License Code: Babylon 8.0 & Oxford Dictionary: K9ADA3A05HJQ0JDXMQ3A7W56BFSC89**AT
User Name: Denise Van Dyk
License Code:﻿ Babylon 8.0 & Oxford Dictionary: KD70R02T6RN8BK4SMUETW7D5GKPUJ8**3N
User Name: Washington89
License Code: Babylon 8.0 & Oxford Dictionary: WEQ6QS8BXBDAA7YSTZU7TFFM4MESKM**ZN﻿
User﻿ Name: orduna1977
License Code:Babylon 8.0 & Oxford﻿ Dictionary: Z5AXV3SSUWX7XZNYYK79SWXFBCWV7B**JU
User Name: harold p nash
License Code: Babylon 8.0 & Oxford Dictionary: 92KVDQ7N0JTTTEQH6MT58HGQ5N093W**RD﻿
အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ.... ဤလင့်မှ ကူးယူဖော်ပြသည် ။
Last edited by phoetharlay; 08-01-2011 at 03:41 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ phoetharlay အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဆန်းမောင်, ဇော်ရဲပိုင်, hellboy, Kyaw Nay Soe, Oliveway, psycho, tu tu
အခုတစ်လောကျွန်တော်တို့ အင်တာနက်ချိတ်ထားတဲ့လူတွေ.......... babylon က ဒုက္ခတော်တော်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ..........ကျွန်တော်လည်း ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေတော်တော်များများစုံနေပြီထင်တာပဲခင်ဗျာ...... babylon နဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ ဖြစ်နိုင်တဲ့ ပြဿနာလေးတွေ ကျွန်တော်ရေးပေးသွားပါ့မယ်ခင်ဗျာ........ တော်တော်လည်း ဒုက္ခရောက်ခဲ့တာပါ........
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီမှာ ကျွန်တော် babylon ပြဿနာဖြစ်လို့ သွားလုပ်ပေးပါတယ်.....ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်း babylon ကို uninstaller နဲ့ ဖြုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ...... အဲဒါပြီးတော့ မသင်္ကာလို့C/Program file ထဲကိုသွားကြည့်ပါတယ်ခင်ဗျာ..... အဲဒါမှာ babylon ဆိုတဲ့ ဖိုဒါကို တွေ့ လို့ ကျွန်တော် Shift+Del ကီးနှိပ်ပြီးတော့ ဖျက်ပါတယ်...... ဘယ်လိုမှ မပျက်ပါဘူး....... အောက်ကလို error မျိုးတတ်ပါတယ်
အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော် TuneUp Shredder နဲ့ ဖျက်ပါတယ်........ မပျက်ပါဘူးခင်ဗျာ........ အဲဒါနဲ့Registry ထဲကိုလည်း HKEY CURRENT USER==>Software==>babylon ကို Right click ထောက်ပြီးတော့ ဖျက်ပါတယ်......ပြီးတော့ HKEY CURRENT MACHINE==>Software==>babylon ထဲက ကောင်ကိုလည်း Right click ထောက်ပြီးတော့ ဖျက်ပါတယ်......ပြီးတော့ C ထဲက ကောင်ကို ပြန်လာဖျက်ပါတယ်........မပျက်ပါဘူး........ ခေါင်းလည်း နည်းနည်းစားသွားပါတယ်......ဒါနဲ့ ကျွန်တော်အမှတ်ရသွားတာ တစ်ခုက ကျွန်တော်တို့Babylon က Starup ထဲမှာ ၀င်နေတတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ တွေးမိတာနဲ့Run box မှာ msconfig ကို ရိုက်ပြီးတော့ Startup ထဲသွားကြည့်လိုက်တော့ ဟုတ်တာပေါ့ဗျာ........ အဲဒီထဲမှာ မောင်မင်းကြီးသာက အခန့် သားပဲ......
အဲဒါနဲ့အဲဒီက Babylon Client ရှေ့ မှာ uncheck ပေးပြီးတော့ စက်ကို Restart ပေးလိုက်ပါတယ်...... ပြီးတော့ ပြန်တတ်လာတော့ အစောက C/ Program file ထဲက ကောင်ကို သွားဖျက်ကြည့်တော့ ဖျက်လို့ ၇သွားပါတယ်ခင်ဗျာ....... အဲဒါပြီးတော့ babylon ကို ပြန် Run လိုက်တော့ အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါတယ်ခင်ဗျာ.......
ပြီးတော့ ကျွန်တော့်စက်မှာ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့သော ပြဿနာပါခင်ဗျာ.......... သူများတွေ စက်တွေတော့ ကျွန်တော်လိုက်လုပ်ပေးတာ အဆင်ပြေပါတယ်...... အဲဒါနဲ့့ကျွန်တော့်စက်လည်း ဖြုတ်လိုက်ပြန်တင်လိုက်ပေါ့ဗျာ....... ဒါနဲ့ ကျွန်တော်သူများတွေကို ကျွန်တော့်မှာ အဆင်ပြေတဲ့ ကောင်လေးကို အားလုံးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်......ဒီကောင်လေးက ဘယ်နားက ဒေါင်းထားလည်းတော့ မှတ်မိတော့ဘူးဗျာ.......... ဒီထဲမှာ ကီးဂန်းလည်း ပါတယ်...... ကီးလည်း ပါတယ်ခင်ဗျာ............. ဒါနဲ့အစက ကျွန်တော်လိုက်လုပ်ပေးတုန်းက ကီးကို မသုံးဘူး......... ကီးဂန်းနဲ့ ပဲ ခရက်လုပ်ပေးပြီးတော့ တင်ပေးခဲ့တာ........ဒါနဲ့ ကျွန်တော့်ဆော့ဝဲပေးလိုက်တဲ့ သူငယ်ချင်းက သူက ကီးဂန်းမသုံးဘဲနဲ့ကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့ထဲမှာ ပါတဲ့ ကီးနဲ့ ......... ကျွန်တော်တို့ ဆော့ဝဲ Run တော့ ကီးတောင်းတဲ့နေရာမှာသူက နဂိုမူရင်းအတိုင်း Accept မလုပ်ဘဲနဲ့........ ဒီထဲမှာပါတဲ့ ကီးလေးကို သုံးပြီးတော့ သူ Run လိုက်တာ အဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ ...... ကျွန်တော်လည်း အဲဒီလိုပြန်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ babylon ကို uninstaller နဲ့ ဖြုတ်ပါတယ်...... ပြီးတော့ အစောက အတိုင်း C ထဲကော Registry ထဲကို ပါလိုက်ဖျက်ပါတယ်......ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ပြန်ရမ်းမလို့ ကြည့်လိုက်တော့ စက်ထဲမှာ ကျန်နေတဲ့ သဘောကိုပြနေပါတယ်....... ကျွန်တော်တို့ တွေ Babylon မတင်ခင်မှာ ပဒုမ္မာက လုပ်ထားတဲ့ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ဖိုင်လေးရဲ့ချော့ကတ်လေးက babylon ပုံလေးမပေါ်ဘူးလေ........ အဲဒါ အခု ကျွန်တော်က အားလုံးလည်း ဖြုတ်ပြီးပြီ.......သူက babylon ပုံလေးမပျောက်ဘူးဗျာ..........ဒါနဲ့ တစ်ခုခုတော့ လွှဲနေပြီဆိုတာ သိလိုက်တယ်....... မသေချာမှာကြောက်လို့C ထဲကော Registry ထဲကိုပါ နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်စစ်လိုက်တယ်... ဘာမှ မကျန်ဘူး........ ဒါနဲ့မထူးပါဘူးလေဆိုပြီးတော့ babylon ကိုတင်ကြည့်လိုက်တယ်....... ကျွန်တော်တို့ ပုံမှန် Run နေကျအတိုင်း ကီးကို Accept လုပ်မှာလားဆိုတဲ့ အဆင့်မှာလည်း ဘာမှ ထည့်လို့ ရဘူးဗျာ.........ဟောဗျာ...... Run လို့ တော့ ရတယ်........ဘာမှ သုံးလို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ်...... အဲဒါနဲ့ ပြန်ဖြုတ်တာပေါ့........ အားလုံးအစက ပြန်လုပ်တာပေါ့.......... ပြီးတော့ မထူးဘူး အစောက အတိုင်းပဲ အကုန်မပြုတ်ဘူးဆိုတဲ့ သဘောမျိုးပြနေတယ်...... ဟာ ဘယ်လိုဖြစ်လည်းပေါ့......ဒါနဲ့ မသင်္ကာလို့babylon 8 ကိုတင်ကြည့်လိုက်တော့ အောက်ကလို စာတမ်းကြီးပြနေတယ်ဗျာ.......
ဟာ ဘာဖြစ်ပြီလည်း ပေါ့..........လူလည်း ခေါင်းနောက်သွားတယ်........အပေါ်က ပြဿနာအတိုင်း Startup ထဲများကျန်နေလို့ လားပေါ့.......အဲဒါလည်း ဟုတ်ဘူးဗျာ.......ဒါနဲ့babylon 8 ကိုပြန်တင်ကြည့်လိုက်တော့ တတ်တဲ့ error ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ Registry ထဲမှာ ကျန်နေတယ်သဘောကို ပြနေတယ်......ဒါနဲ့ နည်းနည်းစဉ်းစားမိသွားတာပေါ့..........Registry ကို TuneUp သုံးပြီးတော့ ရှင်းကြည့်လိုက်အုံးမယ်လို့ ........ပထမဆုံး Clean registy လုပ်လိုက်တယ်.........ပြီးတော့ စိတ်မချလို့Defragment registry ပါလုပ်ပြီးတော့ စက်ကို Restart ပေးလိုက်တယ်.......ပြန်တတ်လာတော့ အစောက အတိုင်း ပဒုမ္မာက လုပ်ထားတဲ့ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ဖိုင်လေးရဲ့ချော့ကတ်လေးက babylon ပုံလေးမပေါ်တော့ဘူးဗျာ...... အဲဒီကျမှပဲ Run လိုက်တော့ ပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားတော့တယ်ဗျာ........ ကီးကို Accept လုပ်ရမယ့်နေရာမှာ ကျွန်တော့်မှာ ရှိတဲ့ ကီးလေးနဲ့ ပဲ ထည့်ပြီးတော့ Run လိုက်တာ အဆင်ပြေသွားပါတယ်ခင်ဗျာ...........
အားလုံးပဲ ကျွန်တော် ကြုံတွေ့ ခဲ့ရသော babylon နဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ ပြဿနာများပါ........နောက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်သတိထားမိတာတစ်ခုကတော့ ကျွန်တော်တို့ တွေ babylon ကို update လုပ်မှာလားဆိုတဲ့ message box တတ်လာရင် ကျွန်တော်အစက ကြက်ခြေခတ်ခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်လည်း အဆင်မပြေဘူးဗျာ........နောက်တော့ စဉ်းစားမိသွားတာက အဲဒီမတ်ဆေ့ဘောက်တတ်လာရင် သုံးနေတဲ့ babylon ကို Right click ထောက်ပြီးတော့ exit လုပ်လိုက်တယ်.....ပြီးမှ အစောက မက်ဆေ့ဘောက်ကို ကြက်ခြေခတ်ကို ပိတ်လိုက်တယ်...... ကျွန်တော်တော့ လောလောဆယ် ဒီနည်းလေးနဲ့ အဆင်ပြေနေပါတယ်ခင်ဗျာ......... ကျွန်တော့်မှာ ရှိသော babylon ဆော့ဝဲလေးပါ........အထဲမှာ ကီးဂန်းကော ကီးပါ ပါပါတယ်ခင်ဗျာ..........
hellboy, Kyaw Nay Soe, KznT, phoetharlay, psycho
ကျွန်တော် အပေၞက ကိုဖိုးသားလေး ပေးတဲ့ version 8 ကို အရင်ပြန် run ကြည့်တယ်ဗျ .. finish ကို click တာနဲ့ တန်း restart ကျတော့တာပဲ .. ကြည့်ရတာ မfinish ချင်ဘူးနဲ့တူတယ် .. .. window ပြန်တက်လာတော့ အောက်ကပုံအတိုင်း Storage initialization failed ဆိုပြီးပြတော့တာပဲ ..
ဒါနဲ့ အောက်က ကိုဆန်းမောင်ပေးတဲ့ version7ကို ထပ်စမ်းကြည့်တော့ ရသွားပါတယ် .. ကျေးဇူးပါ ဆားပုလင်း ကိုဆန်းမောင် ..
ဆန်းမောင်, hellboy, htikewailinn, phoetharlay
20-01-2011, 04:06 PM
Babylon နှင့် out of date
ကျွန်တောကတော့ ditionary ထဲမှာ babylon ကို သဘောအတွေ့ဆုံးပဲ။ မြန်ဆန်တယ်။ ရှင်းလင်းတယ်။ လွယ်ကူတယ်။ အဲဒီအချက်တွေကြောင့်လည်း babylon ကို အသည်းစွဲဖြစ်နေတာ။ အခုနောက်ပိုင်း စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေတို့ရော ဖြစ်လားတော့ မသိဘူး။ Babylon dictionary ကို အသုံးပြုနေရာမှ ထည့်ထားသမျှ dictionary တွေ not working ဖြစ်သွားပြီး purchase လုပ်ခိုင်းနေတာ။
အဲဒါနဲ့ uninstall လုပ်ပစ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ crack ပြန်ချိုးပြီး run ထားလိုက်တယ်။ သိပ်မကြာဘူး။ နှစ်ခါ သုံးခါလောက်ဖွင့်သုံးပြီး ပြန်ပြန် ဖြစ်သွားပါလေရော။ ကျွန်တော်ထင်တာ babylon website က trojan မိနေလို့ပဲ နေမှာဆိုပြီးတော့ uninstall software တွေသုံးပြီး uninstall ပြန်လုပ်ပစ်လိုက်တယ်။ ထပ်တင်တယ်။ out of date ပြန်ဖြစ်သွားပါလေရော။ အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း babylon version 8 ကြောင့်ဖြစ်တာလား မသိဘူးဆိုပြီး7ထပ် တင်ကြည့်တယ်။ မရဘူး။ ဖြစ်မြဲအတိုင်းပဲ။ အဲဒါနဲ့ သူက crack ချိုးလည်း မရဘူး။ license လုပ်ပါကြည့် ဇွတ်ပြောနေလို့ ကျွန်တော်လည်း serial ပါတဲ့ babylon ကိုရအောင် ရှာပြီး download လုပ်မယ်ကွာဆိုပြီး ကျွန်တော်မှာ ရှိနေတဲ့ download site တွေထဲလိုက်ရှာကြည့်လိုက်တယ်။ ကံကောင်းချင်တော့ တွေ့သွားပါလေရော။ အခုတော့ အေးအေးဆေးဆေးသုံးနေပြီ ခင်ဗျာ။ စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေတို့လည်း သုံးနိုင်အောင် ကျွန်တော် mediafire မှာရယ်၊ hotfile မှာရယ် upload တင်ပေးထားပါတယ်။ အဆင်ပြေကြပါစေ ခင်ဗျာ။
Babylon Pro 8 +Serial key
Last edited by thetnaung87; 20-01-2011 at 04:08 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 8 ဦးတို့မှ thetnaung87 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုဦး, လမ်းပြကြယ်, နိုးတူး, arkaraung, bonge, KznT, phoetharlay, tu tu
ဘေဘီလုံနဲ. အဆင်မပြေ အလုပ်ရှုပ်နေကြတဲ. သူများအတွက် အသစ်ကလေးပါ။ကျနော်.ဆီမှာ အသုံးပြုကြည်.တာတော. အဆင်ပြေပါတယ်။တော်တော်လည်း လန်းပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင် 12 ဦးတို့မှ လမ်းပြကြယ် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စစ်တွေသားချေ, ဒဿဂီရိ, ဖန်ဆင်းရှင်, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်ကို, မြင့်မိုရ်, arkaraung, AZM, bagothar85, bonge, phoetharlay, zo
ကျွန်တော်တစ်ခုခုရေးဖို့စိတ်ကူးနေတာ... ဘာရေးရင်ကောင်းမလဲလို့လေ... အဲဒါနဲ့သူငယ်ချင်းစက်ပြင်ပေးရင် ဘေဘီလုံလေးအကြောင်းသတိရမိတာနဲ့ ဗားရှင်းအသစ်လေးလည်းတင်ပေးမယ်ဆိုတော့ ကိုလမ်းပြကြယ်က တင်ပေးထားတယ် အဲဒါနဲ့ အခုစိတ်ကူးပေါက်လာတာက... Serial keys လေးတွေနဲ့ဘေဘီလုံ Setup ဖိုင်လေးကိုမျှဝေပေးလိုက်မယ်လေ... ကောင်းဘူးလား Serial လေး ဆိုတော့နည်းနည်းတော့လက်ပေါက်ကတ်သက်သာတာပေါ့... path , crack တွေက သိတဲ့အတိုင်းလေ.............
Download: ဒီ Setup ဖိုင်လေးက ဒီကဒေါင်းလည်းရတယ်.. ပင်မဆိုဒ် ကဒေါင်းလည်းဖြစ်တယ်.. အဆင်ပြေတဲ့နေရာကယူပေါ့..
User Name	GavinHeale
License Code	G7JTU89SFWEQFVDFV30TBDUGNHHREP*2ZUREK
လက်ဆောင်အပိုကီတွေကတော့..အောက်မှာပါ.. (လက်ဆောင်တို့ အဆစ်တို့တောင်းတတ်တဲ့ အကိုကြီးKznt အကြိုက်နေမယ်နော်... )
User Name: Harry255
Babylon 9.0 + Merriam-Webster: EF2N7Z032ASP2A894UHBQN3TSDPPGK*K0WZX3
User Name: PhyllisGulbransen
Babylon 9.0: SC7GREE93YDTJNE09QCE83NKZM
User Name	mikeszatmari
License Code	3RKNJRBJSB4D07DYYGZS2WR4WM
User Name	robertorine
License Code	ZGFJ6JC3ASHAVFRRMC4JPYQATM
User Name	RossTaylor
License Code	TXUUYCNQKP7NYVKSJHR5F9EXFR
User Name	phillipkeeling
License Code	2RQF2PBARG8D4Q88EJVSJURVVM
User Name	LloydMurphy
License Code	4T4T0H3THUY3YCBU8JF8H4ZFHZ
User Name: mon222
Babylon 9.0: WBJES8WT3KW9DCYH3Y0M9D6KNC
ဖန်ဆင်းရှင်, လမ်းပြကြယ်, သန့်ဇင်ဌေး, မောင်ကို, bagothar85, bonge, zo
အဆင်မပြေတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက်ပါ ၊ အခုပေးတဲ့ license သည် babylone9လိုင်စင်ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ကလဲ ဒီဖိုရမ်မှာ ကျွန်တော် babylone 8 လိုင်စင်ဖိုင် နှစ်ခုပေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ အကုန်လုံးဝိုင်းသုံးလိုက်ကြတော့ သိပ် မကြာလိုက်ပါဘူး--- ဟဲဟဲ--- license files တွေဒေါင်းတဲ့ server တွေက မရတော့ပါဘူး။
လိုက်ရှာလိုက်တော့ youtube မှာ တွေ့လို့ပြန်ရှယ်ပေးလိုက်ပါတယ် တစ်နှစ်စာလို့တော့ပြောပါတယ်။
user = Most i want
User Name GavinHeale
License﻿ Code G7JTU89SFWEQFVDFV30TBDUGNHHREP*2ZUREK
အဆင်ပြေကျပါစေ ။ ကျွန်တော် သုံးနေတဲ့ babylone9လိုင်စင်သည် နောက်ဆုံးက လိုင်စင်ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်9ဦးတို့မှ မောင်ကို အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဖန်ဆင်းရှင်, လမ်းပြကြယ်, သန့်ဇင်ဌေး, ဇော်ဇော်, AZM, bagothar85, KznT, phoetharlay, zo
20-03-2015, 10:43 AM
ဖန်နေ၀န်းတောင်းထားတဲ့ ဘေဘီလုံနောက်ဆုံးဗားရှင်းလေးပါ..။ Version 10.3.0 (r12) ဖြစ်ပါတယ်။ အသံဖိုင်တွေပါထည့်ပေးထားပါတယ်။ ကီးအတွက် Serial ဖိုင်မှာကြည့်ပါ။ အင်တာနက်ပိတ်ပြီး အင်စတောလုပ်ဖို့တော့လိုပါမယ်။ ပြီးရင် Unreal folder ထဲက Patch ဖိုင်ကို run ပေးရပါမယ်။ Nfoview ဖိုင်ကိုသေသေချာချာဖတ်ပေးပါ။
Babylon.10.3.0.12.Retail..Voice.Pack.zip via pCloud
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ ကိုပိုင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဖန်ဆင်းရှင်, လှိုင်မြင့်စိုး, tu tu, zo
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Jul 2016
Padoma English-Myanmar dictionary က myanmar font က အတုံးတွေပေါ်နေလို့ ကူညီကြပါအုံးခင်များ
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ winhlaing03 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by winhlaing03
padonma english myanmar plugin လေး install လုပ်ပေးကြည့်ပါလားဗျာ